SOO JEEDIN: Hargaysa oo laba arrimood uga dambaynaysa Muqdisho (Cillado ku jira) | Hadalsame Media
”Ma waxaad na mooddeen waddan qabiil?!” – Erdogan oo isaga oo…
”Sharciga looma sinna!” – Cafinta Ina Carte ee MW Somaliland oo…
Khayrre oo gaarey dalka Turkiga & dadwayne fara badan oo soo…
”Bal noo sharrax warkan!” – Itoobiya oo u yeertey Danjiraha Maraykanka…
”1.5 milyan ayaa baahi u dhimanaysa!” – DF Itoobiya oo meel…
Khabiib oo ka hadlay laacib Muslim ah oo uu jeclaa inuu…
Home Maqaallada SOO JEEDIN: Hargaysa oo laba arrimood uga dambaynaysa Muqdisho (Cillado ku jira)
SOO JEEDIN: Hargaysa oo laba arrimood uga dambaynaysa Muqdisho (Cillado ku jira)
(Hargaysa) 19 Juun 2020 – Somaliland oo horay u ahayd maxmiyad Ingiriiska hoos tagta oo ka tirsan 5-ta gobol ee uu gananihii Galbeedku u qaybiyey geyiga Soomaali, ayaa 1991-kii si halhaleel ah ugu dhawaaqday inay ka laabatay midnimadii Somalia inteeda kale.
Yeelkeede, cid taa ilaa iminka ka hoos qaadday ma jirto, balse waxaa habeen hore soo dhamaaday shir lagu qabtay Jabuuti oo uu Maraykanku dabada ka riixayo, kaasoo xogta laga helayaa ay sheegayso in lagu doonayo qaab Somaliland ku qancin karta inay midnimada, oo aan reer woqooyigu wada diidanayn, si buuxda loo ogolaysiiyo Maamulka Hargaysa.
Warqaadka The Frontier ayaa soo jeedinaya qaab ay labada dhinac ku wada jiri karaan, kaasoo ah mid sida uu yiri ay ”Somaliland ku haysanayso hannaankeeda maamul, dhaqaale iyo sharci, balse ay Muqdisho uga dambaynayso arrimaha Dibedda iyo Gaashaandhigga.
Waxaa la moodayaa inuu nidaamkaasi u qaab egyahay midka Konfederaalka. Yeelkeede, wuxuu qorayaa in ay sidoo kale u madax banaanaan karto xiriirka ganacsi ee ay la leedahay caalamka isla markaana ay lahaanayso lacag iyada u gaar ah.
Dalka qura ee nidaamkan la yiraahdo ”hal dal iyo nidaam” ku dhaqma waa Shiinaha iyo Gobolka uu Ingiriisku gumaysan jirey ee Hong Kong, kaasoo dib Shiinaha loogu celiyey markii uu xoriyadda qaatay 1997-kii, waxay leeyihiin lacag u gaar ah iyo xiriir ganacsi oo caalami ah.
Yeelkeede, kaddib dibed baxyadii halkaa ka dhacay, kaddib madax xanuun badan, kaddib wareer badan oo dhanka is waafajinta labada nidaam ah, Beijing ayaa iminka u aragta inaan muddo dheer lasii joogtayn karin nidaam noocaas ah, waxaana durba laga qaaday maqaamyadii ay lahayd, kaddib markii la ansixiyey XEER cusub oo Beijing u saamaxaya in iyada loo gacan geliyo qofkii ay dacwo u qabto, halkii awal Hong Kong sharcigeeda gaarka ah lagu qaadayey.
”Somaliland waxay yeelanaysaa booliis, millateri, doorasho madaxwayne iyo hannaan siyaasadeed oo ka duwan dalka Somalia intiisa kale.” ayuu soo jeediyey warqaadka Frontier oo maqaal af Ingiriisi ku qoran arrintan kusoo bandhigay, balse millateri dal lihi uma baahna inuu mid kale gaashaandhig uga dambeeyo, sidaa darteed, waa maqaal u baahan is waafajin badan.
Xitaa Hong Kong oo ah halka qura ee tusaale loogu soo qaato ‘one country, two systems’ millaterina malaha, tan kale, wax laba nidaam ihi kama kala jiraan Somalia oo waa laba nidaam oo isku nooc ah, lana mid maaha Shiinaha oo ku kala dhaqma Hanti Wadaagga Beijing & Hanti Goosiga Hong Kong.
Previous article”Wuxuu igu yiri waan ku baasinayaaye ila BAASHAAL!” – Arrin murugo badan oo Muqdisho ka socota (Sheeko run ah)
Next articleImaaraadka oo eed kala dul dhacay OLOG ay aad iskugu dhowaayeen (Turkiga oo uu si dadban guul ugu qiray!)
”Ma waxaad na mooddeen waddan qabiil?!” – Erdogan oo isaga oo ku dhega hadlaya Khaliijka weerar ku qaaday Maraykanka + Sawirro
”Sharciga looma sinna!” – Cafinta Ina Carte ee MW Somaliland oo muran ka dhex dhaliyey shacabka
Khayrre oo gaarey dalka Turkiga & dadwayne fara badan oo soo dhoweeyey + Sawirro (Madax uu la kulmi rabo)
(Malatya) 25 Okt 2020 - Turkey ma ah “dal qabiil” oo la iska riixriixi karo, ayuu yiri MW Recep Tayyip Erdogan oo ka jawaabtey...
”Bal noo sharrax warkan!” – Itoobiya oo u yeertey Danjiraha Maraykanka & xaaladda oo kacsan
FIFA oo qaab dhega hadal ah dhambaal hambalyo ah ugu soo dirtay Wasiirka Isboortiga cusub (Sumad aysan lahayn wasiirradii hore oo uu leeyahay)